Anyị na-enyocha Huawei P Smart (2019), njirimara na ule nyocha | Gam akporosis
Anyị na-enyocha Huawei P Smart (2019), ntinye ntinye nke ụlọ ọrụ Asia
Michael Hernandez | | Nyocha
Ntinye ntinye na-atụgharị n'ime ala apịtị nke ịlụ ọgụKemgbe oke mmiri nke ụlọ ọrụ Asia na Spain, agbanyeghị, nke bụ eziokwu bụ na Huawei agagharịwo nke ọma na mpaghara ndị a ruo ọtụtụ afọ na mba anyị, yabụ na ahụmịhe ya na njedebe na-egbo mkpa nke ndị ọrụ nkịtị.
Oge a anyị nwere E nwere ọtụtụ nkọwa ị kwesịrị ịmara tupu ịnweta ekwentị nwere njirimara ndị a, yabụ anyị na-akwado ka ị gafee nyocha anyị iji kpebie ịzụta gị.
Dị ka oge niile, anyị ga-abanye n'ọtụtụ nkọwa zuru oke na ọkwa ngwaike mana niile na ọkwa ahụmịhe onye ọrụ, n'ihi na ihe onye na-azụ ahịa na-achọ na ngwaahịa dị ka nke a bụ Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.Ihe dị ka 200 na Amazon »/] bụ isi iji gboo mkpa gị, na-abụkarị obere-isi mana ịchọrọ iji ya eme ihe. Ya mere, nọrọ ọdụ, n'ihi na oge eruola ka ị mara ihe nke a na-enye anyị Huawei P Smart (2019)
1 Akụrụngwa na imewe: O siri ike ịkọwa ọdịiche ndị a
2 Nka nka na ụzụ
3 Ese foto: ingnweta ihe Huawei chọrọ
4 Ngosipụta na nhọrọ multimedia
5 Jiri ihe omuma: EMUI maka ihe oma na ihe ojoo
5.1 Kasị njọ
5.3 Nke kacha mma
Akụrụngwa na imewe: O siri ike ịkọwa ọdịiche ndị a
Ndị ọrụ dị ka Huawei maara eziokwu ahụ bụ na ihe oyiyi ahụ bụ ihe na-ekpebi maka ịzụta zụrụ nke ọma mara etu esi eji ụdị ọdụ ndị a na silk. Anyi nwere ihu-ihu nile nwere ihu-elu “notch” nke di n’elu n’akuku etiti, ebe obere ahiri ime gbara gburugburu n’ile anya. Ee n'ezie, anyị nwere ahụ mmadụ dị iche iche nke dị ka iko (mana ọ bụghị),mgbe na azụ mpaghara ya abụọ igwefoto na mkpisiaka agụ na-na-na pụrụ iche mkpa. Ọnụ ala dị ala na-ejikọ njikọ microUSB na jackphone headphone, ebe na elu ọnụ naanị ihe anyị nwere bụ tray kaadị SIM abụọ anyị nwekwara ike iji gbasaa ebe nchekwa ahụ site na microSD.
Size:X x 155,2 73,4 8 mm
Ibu ibu:160 grams
Agba:Etiti abalị na Aurora Blue
Ọ bụ ekwentị nwere oke dị oke mma, ma anyị nwere 155,2 millimeters na elu, nwere 73,4mm millimeters n'obosara na 8 milimita na-enweghị atụ. Nke bụ eziokwu bụ na ọdịdị ya a na-atụgharị n'azụ na-eme ka ọ dị mma na aka n'agbanyeghị nha.Ọtụtụ nwekwara ikwu ya lightness, naanị 160 grams.
Ọkwa zuru ezu
Zuru ezu II
Na nkenke, nke a bụ ọnụ na-adị ezigbo mma na aka nke a na-ere na Migdnight Black na Aurora Blue. N'ọnọdụ anyị, anyị na-anwale ụdị oji ahụ, m ga-ekwukwa na ọgụ maka egwu na azụ karịrị ihe furu efu, ọ na-adị unyi nke ukwuu.
Nlereanya P-Smart (2019)
Usoro njikwa Akara 9.0 achịcha na EMUI 9.0
Ihuenyo 6.21-anụ ọhịa IPS panel na FullHD + mkpebi nke 2340 x 1080 na 19.5: 9 na 423ppi
Nhazi Kirin 710 (8 cores (4xCortex-A73 2.2GHz + 4xCortex-A53 1.7GHz))
GPU Ogwe aka Mali-G51 MP4
Nchekwa n'ime 64 GB gbasaa site na SDXC ruo 512 GB
Igwefoto na-aga n'ihu Dual 13MP f / 1.8 na 2MP sensor maka eserese na ndekọ Full HD na nkwụsi ike
Igwe n'ihu 8MP f / 2.0 na ndekọ vidiyo FullHD na ọnọdụ eserese
Njikọ Dual Nano SIM - 2G 3G na 4G LTE - Bluetooth 4.2 - GPS na aGPS Glonass na Baidu - OTG - OTA - NFC - WiFi 802.11a (5 GHz)
Nche Mkpisiaka agụ na isi ihu ude
Batrị 3400 mAh
Ahịa Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.site na euro 200 na Amazon »/]
Njedebe a adịghị arụ ọrụ, nke na-ewe nke mbụ ya ntị seresite na iji njikọ microUSB,Ọ na-esiri m ike ịghọta ihe ụlọ ọrụ Asia chere na ọ gụnyere microUSB ma dịka ọmụmaatụ ịkụ nzọ na kaadị ebe nchekwa ọhụrụ. Anyị nwere ọnụ na na 2019 ga-enwe USBB maka ọtụtụ ihe.
Ese foto: ingnweta ihe Huawei chọrọ
Na igwefoto dị n'azụ anyị nwere 13 MP kachasị elu na oghere f / 1.9 nke ga-abụ isi, igwefoto 2 MP ga-akwado ya mana nke ahụ ga-abụ naanị ọrụ maka inyere anyị aka ị nweta foto eserese eserese eserese.. Ọ nwere ọkụ ọkụ monochrome LED ma anyị agaghị enwe mbugharị anya, ihe anyị nwere bụ ezigbo eriri nke nhọrọ ga-enyere anyị aka iwepụta foto kacha mma: Nchọpụta Scene site na AI; Nightkpụrụ abalị; Ọnọdụ eserese na mmegharị ahụ.
Ime ụlọ AI
Igwefoto ahụ na-agbachitere onwe ha, mana anyị enweghị ike ịjụ maka ihe site na njedebe nke ihe ruru € 200. Anyị nwere mmezi ziri ezi nke agba na ọnọdụ ọkụ dị mma. Ihe ahụ na-amalite ịda mba nke ọma mgbe anyị hụrụ ọkụ azụ na panoramas na mbara igwe, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta nsonaazụ na ọnọdụ ọkụ dị ala. Ọ na-ejupụta na agba, nke na-enye anyị onyogho na-apụtachaghị ìhè na nke na-eju anya, mkpuchi elu nke a na-agabeghị akara, mana nke a na-ahụ anya n'ọtụtụ oge.HDR nwere ike ịbụ ezigbo enyi anyị na ezigbo onye iro anyịDabere n'ọnọdụ ọ bụla, eziokwu ahụ, na-enye ìhè karịa ihe ndị ahụ, ma na-agba mbara igwe ma ọ bụrụ na anyị akpacharaghị anya. Ngwa ngwa Huawei maka igwefoto na-aga n'ihu na-edozi nke ọma ma na-enye ọtụtụ ọnụọgụ nhọrọ ndị ejiri obi ha niile nwee ekele. Maka akụkụ ya, ọnọdụ blur ahụ na-akpa agwa, na-enye nsonaazụ ezi uche dị na ngwakọta nke ngwanrọ na ngwaike, mana ọ pụtaghị.
Eserese onwe onye
Na usoro nke selfie,Anyị na-achọta nkọwa zuru oke ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na anyị nwere mmetụta nke naanị 8 MP.N'ụzọ ezi uche dị na ya ọ ga-agbachitere onwe ya nke ọma, nke ka mma n'eziokwu, ọ bụrụ na anyị nọ n'èzí, ihe na-ada ada mgbe ọkụ adịghị. Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ Eserese mode, anyị ga-rụọ ọrụ «bokeh» mgbe ịnweta taabụ ị ọzọ pụta ìhè otu ihe dị mkpa mma mode rụọ ọrụ site na mmalite na ga-achọ ụfọdụ nkà. Ọ na-agbachitere onwe ya nke ọma ma ọ dị ka ọ naghị eweta ọtụtụ nsogbu ịkọwapụta ihe ndị a ga-egosipụta, ọ bụ ezie n'eziokwu, ọ dị ka anyị enwetala nsonaazụ ka mma mgbe anyị arụghị ọrụ AI.
Ngosipụta na nhọrọ multimedia
Anyị nwere ọhụụ ọhụụ ọhụụ nke na-erughị 6,21 sentimita asatọ, ihe ngebichi niile na-ekele obere nsị ya dị n'elu (otu n'ime ọkacha mmasị m), nke na-enye mkpebi FullHD + nke pikselụ 2.340 x 1080 na njupụta nke 415 dpi. Maka nke a, ọ na-eji akụkụ nke 19,5: 9 eme ihe, enweghị m mmasị n'ụdị oke a dị iche, n'ihi na ha na-amanye gị ịhọrọ n'etiti ọnya ojii ma ọ bụ ọnwụ nke obere ọdịnaya mgbe ị na-elele ọdịnaya.N'ime otu a, anyị na-ahụ ntọala ụlọ ọrụ oyi, nke nwere ezigbo ndị ọcha, na ndị isi ojii ndị na-adịghị nso n'azụ.Otú ọ dị, anyị ahụwo enweghị aha na nchapụta na mpaghara dịka akụkụ elu na nke ala, ihe anyị ahụlarị na ọdụ ndị ọzọ yiri ya ma hapụkwa ụtọ dị n'ọnụ m.
Na ọkwa nke oriri mgbasa ozi anyị nwere ọkà okwu dị ike na ala, ike dị n'ụzọ doro anya otu anyị nwere ike isi kọwaa ya. Agbanyeghị, mgbe anyị na-ewe ụfọdụ ọdịnaya nke ọdịnaya, anyị na-ahụ ụda na-enweghị ọtụtụ ndetu. Otú ọ dị, Ihe zuru ezu maka iji ihe eji eme ihe, anyị ga-ekwukwa na enwere ike ịjụ obere ihe ọzọ na ọnụahịa ego a.
Jiri ihe omuma: EMUI maka ihe oma na ihe ojoo
Nwere ike ịhụ n'anya ma ọ bụ kpọọ EMUI asị na akụkụ nha anya, anyị ga-ekwusi ike n'oge a na anyị ejirila ya rụọ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị mbụ na ọnọdụ agagharị gestural na-arụ ọrụ, nke nwere ike ịbụ panacea gị ma ọ bụ ezigbo ihe kpatara ya. Nke bụ eziokwu bụ na n'agbanyeghị na anyị enweghị akụrụngwa, na-echeta na anyị nwetara ihe 130.026 na ANTUTU, anyị ahụla ọnọdụ ụfọdụ ebe ụgbọ okporo ígwè ahụkarị mgbe na-eme nchọgharị na software aghọwo oke kwesiri ngosi. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ naghị eweta nsogbu ọ bụla na mmezu nke ngwa, anyị nwere ụfọdụ obere ihe ndị ọzọ na nke a.
Na igodo na ngwanrọ ngwanrọ, naanị anyị chọrọ igosipụta ohere ịzobe "ọkwa" site na nhọrọ ngosi. N'aka nke ọzọ, anyị enweghị ụgwọ ngwa ngwa nke anyị gbalịrị n'ọtụtụ ọdụ ndị ọzọ n'ụlọ, agbanyeghị,N'agbanyeghị na anyị nwere 3.400 mAh, anyị tụrụ anya ihe karịa na batrị ahụ, nke ahụ bụ na anyị ga-abịarute na ngwụcha ụbọchị ma anyị chefuo nke na-esote, anyị ga-akwụ ụgwọ n'abalị,Echere m na nnukwu IPS LCD panel ọ nwere ọtụtụ ihe ikwu banyere ya. Maka akụkụ ya, na ọkwa nchekwa anyị na-egosipụta dị ka arụmọrụ pụrụ iche nke onye na-agụ mkpịsị aka, na-eleghara ihu ihu anya anya, nke a na-eme site na igwefoto selfie na nke na-eweta arụmọrụ na-adịghị mma, dị ka mgbakwunye ọ dị mma, mana na nke m, enwere m mmasị iji mee ka ọ ghara inwe nkwarụ. N'ikpeazụ, gosipụta ọkwa ngosi nke dị na ala nke ihuenyo ahụ, na ị chọpụtaghị ọnụnọ ya ruo mgbe ị tinyere ya.
Enweta "rapaara" na EMUI 9.0
Ọ na-ewe microUSB
Olu zuru oke
Ihe kachasị masịrị m banyere ọdụm a bụ n'ezie patchy arụmọrụ nke EMUI 9.0, bụ mmekọrịta mmekọrịta nke ịkpọasị. Agbanyeghị, a na-eburu nkọwa ụfọdụ dị na ọdụ dị otú ahụ, ịmatakwu ihe Huawei nwere ike, dịka ọmụmaatụ na-akwa arịrị n'ihi enweghị ngwa ngwa na njikọ USB-C dị ugbu a.
Nzube na ime mgbanwe na aka
Ibu ibu na njikwa
Ngosipụta na nhazi
Enwere m mmasị n'ọtụtụ ihe banyere ọdụ, n'etiti ndị ọzọ imewe, Huawei agbanweela ọtụtụ, wee mee ka ọ maa mma pụrụ iche n'agbanyeghị agbanyeghị plastik, ị ga-echezọ ozugbo (ị gaghị echefu mkpịsị aka, ee). Ihuenyo ahụ, n'agbanyeghị nrịgo ya na ala ya, ọ dịkwa m ka ọ bụ ihe na-agọnahụ m
Na nkenke, anyị na-eche ihu a nnọọ gbanwee ọnụ na àgwà price, ebe presences dị ka NFC na-enwu, kamakwa ọtụtụ enweghị dị ka USB-C. N'ime ọnụahịa ya, anyị enweghị obi abụọ na Huawei ga-enwe ike iguzo ọtọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ Asia na-eme nke ọma na Spain. Nwere ike nweta ya Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Anyị na-enyocha Huawei P Smart (2019), ntinye ntinye nke ụlọ ọrụ Asia
Wepu ego nke LG G8 ThinQ na 128 GB nke ebe nchekwa di n’ime
Leaked posta nke OPPO F11 Pro